လူကြီးများအတွက် thrush ၏မူးယစ်ဆေးကုသမှု
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ Facial ကုသမှု
Stomatitis ဟာပါးစပ် mucosa ၏ရောင်ရမ်းရောဂါအသုံးအများဆုံးအုပ်စုများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤရောဂါအတွက်ရောင်ရမ်းခြင်း, နီခြင်း, ဒေသခံကိုတွေ့ရှိရပါသည်, အနာများနှင့်အနာဖြစ်ပေါ်စေလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ Stomatitis, ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝဖြစ်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပေါ်ပေါက်ပေမယ့်ဆေးဝါးမှအတော်လေးလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။
Catarrhal stomatitis ။ အသုံးအများဆုံးပုံစံအများအားဖြင့်ပါးစပ်လိုင်နှင့်ဒေသခံအချက်များဆင်းရဲတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်။ သွားဖုံး၏နီခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း, အသွင်အပြင်အဖြူရောင်ပြား, သွားဖုံးနှင့် halitosis သွေးထွက်။
Aphthous stomatitis ။ ဒါဟာအနာရောဂါငြိမ်းစရာ, ခံတွင်း၌နာကျင်မှု, ဖျားနာ၏ရှည်လျားသောကာလနဲ့အဖုများနှင့်အနာစိမ်းများသဏ္ဌာန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာထားတဲ့နာတာရှည်ပုံစံများ, ကပိုင်ဆိုင်သည်။
ရေယုန် stomatitis ။ အဆိုပါရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တော်ကိုနှိုးဆော်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ၏အသုံးအများဆုံးပုံစံ။
မတည့် stomatitis ။
ဖန်းဂတ်စ် stomatitis ။ ပထမဦးဆုံးအရာအရပျ၌, သူတို့ candidiasis တော်ကိုနှိုးဆော်လေ၏။
stomatitis ၏ကုသမှုများအတွက် Medicaments နှစ်ခုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်: ယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက်, မခွဲခြားဘဲရောဂါ (ရောင်ရမ်း, ပိုးသတ်ဆေး, etc ... ) ၏အသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့; သာရောဂါ (ဗိုင်းရပ်စ်, antifungal, Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ၏အချို့သောပုံစံများ၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုသောနှင့်တိကျသော။
Chlorhexidine ။ အများစုမှာမကြာခဏပါးစပ်လိုင်အတွက်ဘက်တီးရီးယားပျက်စီးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်ပိုးသတ်ဆေးတာဝန်ပေးအပ်။
Furatsilin ။ နှစ်ပြားနွေးရေတစ်ခွက်အတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်သင့်ပါးစပ်တနေ့သုံးကြိမ်သုတ်ခြင်း။ ဖြေရှင်းချက် Leave ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, နှစ်လိုဖွယ်မဟုတ်ပေ။
Rotokan , မာလာဝီ, hlorofillipt ။ စက်ရုံ-based ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများကနေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ။
Miramistin ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ခံတွင်း candidiasis ၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုအဆိုပါမူးယစ်ဆေး။
Iodinol, Zelenka, lugol, fukortsin ။ အစက်အပြောက် cautery နှင့်ခြောက်သွေ့အနာစိမ်းအဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးအတွက်ချွဲ၏မီးလောင်ဒဏ်ရာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
Metrogil ချို။ chlorhexidine အပေါ်အခြေခံပြီး gel ။ နှစ်ကြိမ်နေ့အနာစိမ်းထံသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအဓိကအားဖြင့်ကျိုင်းအနာစိမ်းများကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
Acyclovir ။ ရေယုန် stomatitis ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Kamistad ဂျယ်။ Analgesic နဲ့ anti-inflammatory အေးဂျင့်ရောဂါပုံစံအားလုံးကိုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာ Solkoseril paste ။ အဆိုပါပြင်ဆင်မှုသည်အနာပျောက်စေသောအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်အသုံးပြုသည်။
Hydrocortisone ။ ရောဂါမဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ပဋိဇီဝဆေး, ဆေးမှမတည့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဒါပေါ်မှာ။ ဃ) တစ်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခါဤသည်ဆေးကုသမှု tool ကို, တနည်း, stomatitis ဆောင်သွားကြ၏။
Nystatin ။ အခြားနည်းဖြင့်မအောင်မြင်ခဲ့ကြသည့်အခါ, thrush အတူကွာခဏကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သုတ်ဖို့အသုံးပြုဘုံလုပ်ရပ်များအတွက်အချို့သောပိုင်ဆိုင်မှု မှလွဲ. အများစုမှာမူးယစ်ဆေးသည်ယခင်ကတိကျရောဂါခဲ့သည့်ဆရာဝန်တစ်ဦးကသတ်မှတ်ထားသောရမည်ဖြစ်သည်နဲ့ကုသမှုမှရောဂါအမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျပန်မကျြတောငျမှေး - အမျိုးသမီးများအတွက်များအတွက် Rising Sun ကအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှု
Capa သွား Whiten
နံ့သာဆီ Solkoseril တွန့်
Ultrasonic မျက်နှာ peels
အိမ်မှာဘယ်လိုလျင်မြန်စွာ Whiten အံသွား?
အိမ်မှာ facial rejuvenation
မည်သည့်ကလေးသည်ရန်သဘောတူမယ်လို့ထားတဲ့ 16 သွားဆေးခန်း,
သားအိမ်၏ဖယ်ရှားရေး - အကျိုးဆက်များ
အဆိုပါခွေး howls - နိမိတ်လက္ခဏာကို
ဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူ Pituitary MRI
ရေသောက်အိမ်တော်ကို Drake လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုးဖောက်ပန်ကာ
တစ်ဦး sauerkraut ထံမှသုပ် - ချင်းစီနေ့အဘို့အရသာ appetizer ချက်ပြုတ်နည်းများ
မိန်းမတို့အဘို့, Classical ဖိနပ် - အမျိုးအစားများ, မော်ဒယ်များ, အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်,
ပုံရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် Bolero ညနပေိုငျး
Omaron - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
Silica gel ဟာကြောင်အမှိုက်သရိုက်များ